मनोज गुजरेलद्वारा ‘प्लाज्मा’ दान Canada Nepal
Jan 26 2021 | २०७७, माघ १३गते
२०७७, माघ १३गते
मनोज गुजरेलद्वारा ‘प्लाज्मा’ दान
काठमाडौं । हास्यव्यंग्य कलाकार मनोज गजुरेलले कोरोनाभाइरस संक्रमित (कोभिड १९ बिरामी)को उपचारमा महत्वपूर्ण मानिएको ‘प्लाज्मा’ दान गरेका छन् ।
कोरोना संक्रमित भएर निको भई स्वास्थ्य लाभ गरेका कलाकार मनोजले बुधबार प्लाज्मा दान गरेका हुन् । कोरोना संक्रमणमुक्त भएकाहरुबाट लिइएको प्लाज्माबाट अर्काे संक्रमितको प्लाज्मा थेरापी उपचार पद्धति प्रभावकारी मानिएको छ ।
प्लाज्मा दान भने सामान्य रक्तदान जस्तै भएको भन्दै कलाकार मनोजले ’प्लाज्मा दान’ गर्न पाउँदा अत्यन्तै भाग्यमानी महसुस गरेको जानकारी दिएका छन् ।
यसबारे उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन् :
कोभिड उपचारमा ’प्लाज्मा थेरापी’को प्रयोग निकै प्रभावकारी मानिएको छ । यो पद्धतीमा ’कोभिड विजेता’को रगतबाट निकालिएको ’प्लाज्मा’ प्रयोग गरि अन्य बिरामीको उपचार गरिन्छ । यसैका लागि आज ’प्लाज्मा डोनेट’ गर्न पाउँदा अत्यन्तै भाग्यमानी महसुस गरेको छु ।
कोरोना संक्रमितलाई गरिने प्लाज्मा थेरापी भनेको के हो ?
यसको लागि उत्प्रेरित गर्ने डा. बिपिन नेपाल लाई धेरै धन्यवाद । ’प्लाज्मा डोनेसन’ भनेको सामान्य रक्तदानजस्तै हो । ईच्छुकलाई डोनेशन गर्न अनुरोध गर्दछु । यो निःशुल्क सेवा हो । एबी प्लस रक्त समुहको मेरो प्लाज्माले कसै न कसैलाई पुनर्जिवन प्राप्तीका लागि सहयोग पुग्ने बिश्वास लिएको छु । सकेसम्म रोग नलागोस् । लागि हालेमा चाँडै निको होस् ।
पौष २९, २०७७ बुधवार १८:१७:१३ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं । गायक दुर्गेश थापा छोराको बुवा बनेका छन् र यहि खुशियाली साट्दै आफ्नो विवाह भएको समेत दर्शक सामू खुलाएका छन् । श्रीमती प्राची लामाको नाम सहित आफ्नो छोराको तस्विर सार्वजनिक गरेका छन् ।
दुर्गेश थापाले किन श्रीमतीलाई आज सम्म लुकाएर राखे भन्ने प्रश्न अहिले उब्जिन थालेको छ । दुर्गेश थापाले अहिले सम्म श्रीमतीलाई कतै पनि खुलाएका छैनन् साथै न त कुनै तस्विर नै राखेका छन् । धेरैलाई दुर्गेश सिंगल भन्ने थियो तर अचानक छोरा सहितको तस्विर राख्दा धेरै चखित परेका छन् ।
आज एक गितको शुटिङ्गको क्रममा दुर्गेश थापाले मिडियासँग कुराकानी गर्दै आफूले श्रीमती लुकाउनुको रहस्य बारे बोलेका छन् । आफ्नो चाहना भन्दा पनि श्रीमती कै चाहनाले गर्दा यो कुरा लुकाएको उल्लेख गरेका छन् ।
दुर्गेशले भने, "खास मैले भन्दा श्रीमतीले यो कुरा नखुलाउन मलाई भनेकी हुन् । अहिले श्रीमतीको बारेमा खुलाउँदा फ्यानहरु घट्ने हुन् कि भनेर श्रीमतीले नै क्यारियरमा फोकस गर्नु भनेर यो कुरा गोप्य राखेका हौँ तर जब छोरालाई हातमा बोकें मेरो आँखाबाट आँशु झर्यो । अनि खुशी साथ मैले यो खुशी दर्शक सामू व्यक्त गरेको हुँ ।"
माघ १२, २०७७ सोमवार २१:३०:१२ बजे : प्रकाशित
अभिनेत्री रेनु योगीसँग जोडि बाध्दै प्रदीप खड्का
काठमाडौं - निर्देशक दिनेश राउतको नयाँ फिल्म 'प्रकाश' मा नयाँ अभिनेत्री भित्रिएकी छिन् । यस फिल्म मार्फत रेनु योगीले फिल्ममा अभिनेत्रीको रुपमा डेब्यू गर्ने भएकी छिन् ।
फिल्ममा चर्चित अभिनेता प्रदीप खड्काको मूख्य अभिनय रहने भएको छ । फिल्ममा प्रदिपले रेनुसँग जोडि बाध्ँनेछन् ।
फिल्मको प्रस्तुति र क्यारेक्टरसँग मिल्ने भएकाले रेनुलाई यस फिल्ममा अनुबन्ध गरिएको हो । ‘मितज्यू’ नामक नाटक खेलेकी रेनुको अभिनय दर्शकले रुचाएका थिए ।
फिल्मको छायांकन जुम्लामा गरिने भएको छ । फिल्ममा प्रदिपले गाउँले यूवकको भूमिका निर्वाह गर्दैछन् । बिनिस इन्टरटेनमेन्टको प्रस्तुति रहेको यस फिल्मलाई महेन्द्र अधिकारीले निर्माण गर्दैछन् ।
माघ १२, २०७७ सोमवार १९:०९:१२ बजे : प्रकाशित
# प्रदीप खड्का
# रेनु योगी
रहेनन् ‘यो नानीको मिर्मिरे आँखा’का सर्जक धनबहादुर गायक
पोखरा - यो दाजुको मिरमिरे आँखा
कस्तो मेरो बिगा¥यो दिमाख
(गायक प्रवीण गुरुङ बिमाकुमारी दुरा, सङ्गीत एवम् रचना धनबहादुर गायक)
गन्धर्व संस्कृतिका धरोहर लोककलाकार धनबहादुर गायक निधन भएको छ । गायकको उपचारको क्रममा आज बिहान मनिपाल अस्पताल पोखरामा निधन भएको हो । पोखरा–१६ बाटुलेचौरका गायक ‘यो दाजुको मिरमिरे आँखा’, ‘बेली र चमेली’ लगायत अजर–अमर गीतका सर्जक हुनुहुन्थ्यो । विसं २०२१ मा जन्मनुभएका गायक छाती र फोक्सोमा समस्या देखिएपछि मनिपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा सघन उपचार कक्षमा उपचारत हुनुुहुन्थ्यो । गन्धर्व संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ गायकले पछिल्लो समय सारङ्गी संरक्षण पाठशालासमेत चलाउँदै आउनु भएको थियो । उहाँ “लोक संस्कार र संस्कृति बाँचे मात्र आफ्नो पहिचान बाँच्छ” भन्नेमा विश्वास गर्नुहुन्थ्यो । गन्धर्व गायनका चर्चित गायक झलकमान गन्धर्वका भाञ्जा गायकले विसं २०६६ मा झलकमान गन्धर्व राष्ट्रिय लोकबाजा सारङ्गी संरक्षण पाठशालाको स्थापना गरेर गन्धर्व संस्कृति संरक्षणमा सक्रिय बन्नुभएको थियो ।
सहपाठी, संस्कृतिकर्मी र लोकगायिकाका नजरमा धनबहादुर
कृष्ण थापा, सहपाठी एवम् गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य )
धनबहादुर गायक लोकसंस्कृति एक सशक्त धरोहर हुनुहुन्थ्यो । लामो समयदेखि म उहाँसँग परिचित छु, डाँफे कला मन्दिर आरम्भदेखि हामी सँगै भयौंँ । बहुप्रतिभाशाली उहाँ गायन, वाद्यवादन, नृत्य तीनै कुरामा पोख्त हुनुहुन्थ्यो । उहाँको गायक सरोजगोपालसँग पनि निकै राम्रो सम्बन्ध थियो । पोखराको कुनै पनि साङ्गीतिक गतिविधिमा धनबहादुर भएनन् भने के भएन जस्तो लाग्थ्यो । पछिल्लो समय झलकमान गन्धर्व सारङ्गी संरक्षण पाठशाला खोलेर उहाँले नयाँ पुस्तालाई सारङ्गी र मादल सिकाई संस्कृति हस्तान्तरण गर्नुभयो । यो उहाँको निकै महत्पूर्ण योगदान हो । उहाँले क्रिश्चियन धर्म अपनाए तापनि हिन्दूधर्ममा उस्तै आस्था र श्रद्धा थियो । विन्ध्यवासिनी मन्दिरमा दशैँका समयमा सारङ्गी र मादलको धुनबाट मादलबाट मालश्री धुन बजाउन उहाँले सहयोग गर्नुभयोे । पोखराको महत्वपूर्ण साङ्गीतिक सङ्घसंस्थामा उहाँको संलग्नता थियो, उहाँ जस्तो कर्मठ सर्जक सम्भवतः अब यस क्षेत्रमा पाउन निकै मुश्किल पर्नेछ ।
बाटुलेचौरको माटो लोकसंस्कृतिले सिञ्चित छ । गन्धर्व समुदायको बस्ती पनि यस क्षेत्रको एउटा विशेषता हो । सामाजिक मूल्यमान्यता, रहनसहन, संस्कृति र संस्कारको प्रतिविम्ब लोकगीतको मौलिकतामा भेटिने यस क्षेत्रका सर्जक धनबहादुर गायकको निधनले अपूरणीय क्षति पु¥याएको छ । उहाँ अजर –अमर गीतका सर्जक मात्र नभई कुशल वाद्यवादक पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पोखरेली सङ्गीतका क्षेत्रमा मात्र नभई नेपालको सङ्गीत क्षेत्रको एउटा असल सङ्गीतकर्मी पनि हुनुहुन्थ्यो । उहाँ पुर्खाको चिनोलाई जर्गेना गर्न तल्लीन हुनुभयो । उहाँले पछिल्लो पुस्तालाई सारङ्गीको संरक्षणमा सहभागी गराउनुभयो । लोकसंस्कृति विशेष गरी सारङ्गी संरक्षणमा उहाँले पु¥याएको योगदान निकै महत्वपूर्ण छ । रासस
माघ १२, २०७७ सोमवार १३:३४:२१ बजे : प्रकाशित
# धनबहादुर गायक
काठमाडौं - चर्चित गायक तथा मोडल दुर्गेश थापा बुबा बनेका छन् । आइतबार सामाजिक सञ्जाल फसबुकमार्फत गायक थापाले आफु बुबा बनेको जानकारी गराएका हुन् ।
प्राची लामासँग प्रेम विवाह गरेका थापाले आफु बुबा बनेको भन्दै फेसबुकमा तस्बिर शेयर गरेका छन् । उनले "नयाँ मान्छेलाई सुनौलो संसारमा स्वागत छ" लेख्दै प्राचीलाई पनि ट्याग गरेका छन् ।
उनले शेयर गरेको पोष्टमा धेरैले बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । धेरै शुभचिन्तकहरूले विवाह नगरी कसरी बुबा भन्दै चकित पर्दै कमेन्ट गरेका छन् ।
केही समयअघि पनि दुर्गेशले आफ्नी प्रेमिका प्राचीलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत जन्मदिनको शुभकामना दिएका थिए । बिच्च बिच्च बाट चर्चामा आएका दुर्गेश लोकप्रिय गायकको रुपमा परिचित छन् ।
माघ ११, २०७७ आइतवार १४:०१:४७ बजे : प्रकाशित
सन्तु थापा र समिक्षा अधिकारीको पञ्चेबाजा गीत 'लाहुरे दाईलाई' सार्वजनिक (भिडियो)
काठमाडौं - गायक सन्तु थापाको नयाँ मौलिक पञ्चेबाजा गीत सार्वजनिक भएको छ । गायक थापा र गायिका समिक्षा अधिकारीको सुमधुर स्वरमा सजिएको 'लाहुरे दाईलाई' बोलको गीतको भिडियो शुक्रबार युट्युबमा सार्वजनिक भएको हो ।
भिडियोलाई गायक थापाको आफ्नै आधीकारीक युट्युब च्यानल मार्फत सार्वजनिक गरेको हो । गीतमा अनिश दवाडीको शब्द रहेको छ भने संगित संयोजन विश्वाश नेपालको रहेको छ ।
गीतको स्वरमा प्रेमा राना मगर, रुपी सिंजाली मगर, ओम सेन्चुरी र अमित सुनारले पनि साथ दिएका छन् । त्यस्तै गीतको अडियो मिक्सिङ कुमार रानाले गरेका छन् ।
भिडियोमा सुमित्रा गुरुङ, सन्तोष मगर, टहलसिंह फुङ्जेली, गितु पुन, अमृता गुरुङ, कपिल मगर, मनिष सेवाल लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ । भिडियोलाई सन्तु थापा आफैले निर्देशन गरेका छन् भने मधुर बस्नेतले खिचेका छन् ।
माघ ११, २०७७ आइतवार १३:४५:०४ बजे : प्रकाशित
# सन्तु थापा
काठमाण्डौ। अभिनेता राजेश हमालले अभिनय गर्ने नयाँ चलचित्र ‘सत्यम’को ‘थिमेट्रीकल स्केच पोस्टर’ सार्वजनिक गर्दै अडिशन कल गरिएको छ । पोस्टरमा हमाललाई महानायक लेख्दै उनको स्केच फोटो राखिएको छ । ‘सत्यम’ शिर्षकसँगै ‘राईजिंग अफ दि हिरोज्’ लेख्दै चलचित्रको शिर्षकलाई परिभाषित पनि गरिएको छ ।
‘रोमियो’ फेम्ड निर्देशक शंकर कार्कीले निर्देशन गर्न लागेको यो चलचित्रमा काम गर्न सहमती जनाउनको लागि अभिनेता हमालले आठ महिना लामो समय लिएका थिए । निर्देशक कार्कीका अनुसार हमालकै अनुरोधमा पुरै चलचित्र टुडि (2D) प्रविधिमा बनिरहेको छ । फ्लोरमा जानुअघि 2D मा हेरेर आवश्यक सुधार गरिने निर्देशक कार्कीले बताए ।
यो चलचित्रमा हमाल नै मूख्य पात्र (सत्यम) हुन् भने अनुप बिक्रम शाही भिलियनको रुपमा रहनेछन् । स्केच फोटोबाट चलचित्रमा हमालको चरित्र अनुमान गर्न सकिन्छ । यसअघि चलचित्र ‘सौर्य’मा एकसाथ देखिएका राजेश र अनुपको अभिनयलाई लिएर अहिले व्यापक चर्चा छ । लामो समयपछि चलचित्रमा फर्केका हमाल र भिलियनको रुपमा अत्याधिक रुचाईएका अनुपको भिडन्तको दर्शकमाझ व्यग्र प्रतिक्षा रहेको छ ।
काठमाण्डौमा यहि माघ १९ गते, पोखरामा माघ २३ गते, बुटवलमा माघ २५ गते र झापामा माघ २७ गते अडिशन हुनेछ । अडिशनमा सहभागि हुन चलचित्र निर्माता कम्पनी नवयुग सिनेमा प्रा.लि.को इमेल ठेगाना [email protected] मा आफ्नो सम्पर्क नम्बर सहित प्रोफाईल तथा शोरिल पठाउनुपर्नेछ ।
माघ ११, २०७७ आइतवार १३:३४:०३ बजे : प्रकाशित